भीम रावल एमाले अध्यक्षको एक्लो उम्मेदवार ! | Dainik News Nepal
भीम रावल एमाले अध्यक्षको एक्लो उम्मेदवार !
१० औं महाधिवेशनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावल
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु एमाले अध्यक्षको लागि उठ्ने नउठ्ने निर्णय नगरिसकेको बताएसंगै उपाध्यक्ष भीम रावल १० औं महाधिवेशनमा नेकपा एमाले अध्यक्षको लागि अहिले सम्म एक्लो उम्मेदवारी बनेका छन ।
आज मंगलबार सम्पादकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा उनले आफूलाई चुनौती दिनेलाई सम्मान र स्वागत गर्ने बताए।
एमालेको अध्यक्षको रुपमा ओली नै दोहोरिने निश्चित प्राय भएको बेलामा उनले आफ्नो उम्मेदवारी टुंगो नभएको बताएका हन्। मैले अध्यक्षमा उठ्ने वा नउठ्ने कुनै निर्णय गरेको छैन। उठ्ने भएँ भने अध्यक्षमा अरुलाई नउठ्न भन्दिनँ, उनले भने।
अध्यक्षमा यसअघि नै भीम रावलले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। तर, त्यसलाई चुनौतीको उनले चर्चा गरेनन्। रावलजीले मलाई चुनौती दिनुभएको होइन। उहाँले मप्रति आदर सम्मान नै गर्नुभएको छ। तपाईंलाई थकाइ लाग्यो होला, म उठ्छु भन्नुभएको छ उनले भने।
हिजो पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नेकपा एमाले अध्यक्षको लागि भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी दिएका हुन । तर केपी ओलीको योजना भने अझै पनि सर्वसम्मत नै नेकपा एमालेको अध्यक्षमा दोहोरिने रहेको छ । उनले घोषणा गर्नु र नगर्नुमा त्यति धेरै फरक पर्ने छैन । किनकि उनी बाहेक एमालेमा अन्यले अध्यक्ष पद ताकेका छैनन र ताक्नेहरुले हिम्मत गर्ने वाला छैनन ।
केपी शर्मा ओलीले भीम रावलले दिएको एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारीलाई बेवस्था गरे जस्तो गरेपनि उनी निकट महेश बस्नेतले त भीम रावललाई उचित जिम्मेवारी दिएर उम्मेदवारी फिर्ता गर्न समेत आग्रह गरेका छन । त्यस्तै सचिव योगेश भट्टराई, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत भीम रावलको उम्मेदवारीलाई आलोचना गरेका छन ।
१० औं महाधिवेशननेकपा एमालेभीम रावल